ICoq Bleu Homestay, ikhaya lamaFrentshi. I-SUITE
Igumbi lakho lokulala e indlu esemaphandleni sinombuki zindwendwe onguChantal
Bonjour, ndingumFrentshi kwaye ndamkelekile ekhayeni lethu, eLe Coq Bleu. Siyindawo yokuhlala, AYIYOhotele, AYIYOndlu edlulayo. Sihlala kwindlu encinci enezinja ezi-4. Siyakonwabela ukwabelana ngayo nabani na ojonga amava okuhlala ekhaya ngochuku lomntu.
Sifuna iindwendwe zethu zigonyelwe ngokupheleleyo i-Covid
ABAKHENKETHI: faka isicelo semvume yondwendwelo kwi visita.baguio; Indawo yokuhlala eCoq Bleu Homestay
I-APORs: ndicela undithumele ifoto yekhowudi yakho ye-QR evela ku-hdf.baguio
NCEDA ufunde iinkcukacha kunye nemithetho yendlu!
Yindlu yokulala eyi-1 enendawo yokuhlala/yokutya kunye ne-T&B. Igumbi linebhedi enkulukazi, ilungele izibini. Indawo yokuhlala inebhedi ye-trundle (2 single) kunye ne-1 sofa. Ixabiso le-suite ngabantu aba-2, kukho i-P500 kumntu ngamnye owongezelelweyo. Ubukhulu bomthamo yi-5 pax.
Abantwana abaneminyaka emi-2-5 ubudala, imali eyongezelelweyo yiP250.
Ijonge indawo enemithi, ngako oko ngamanye amaxesha sineencukuthu ezingena ngaphakathi.....nangona kutshizwa rhoqo. Indawo yokuhlala ikhanya ngefestile enkulu yemifanekiso; indawo yokulala inokukhanya okuthambileyo.
4.83 ·Izimvo eziyi-173
4.83 · Izimvo eziyi-173
Icandelwana labucala eliyi-1 km ukusuka kuhola wendlela; malunga ne-5 ukuya kwi-6 km ukuya kumbindi wedolophu.
Indawo yokupaka ingaphandle kwendlu yethu, kwindlela yokwahlulahlula.
I-1.5 km ukusuka kwindlu yethu, kukho iivenkile ezininzi, iivenkile zokutyela, icawa, ifama yobisi, ibhanki, isikhululo segesi, ivenkile yeeyure ezingama-24.
Imyuziyam yaseBencab ikumgama oziikhilomitha ezi-3-4 ukusuka kwindlu yethu. Kukho ibala legalufa elikumgama oyi-1km kunye nendawo yokutyela.
I-suite ibucala kakhulu. ukuba ningababini kwaye azikho ezinye iindwendwe ezibhukishweyo endlwini, wamkelekile ukuba uze kwigumbi lethu lokuhlala ukuze ukonwabele ukuphumla ngaseziko.
Sinezinja ezi-4 ezihlala nathi ngaphakathi endlwini; ziswiti kakhulu, izinja ezinothando.
Sithanda uxolo noxolo, AKUKHO ziganeko, AKUKHO maqela avunyelweyo! AKUKHO ngxolo emva kwe-10PM!
Sinika isidlo sakusasa kwisitayile saseYurophu; I-Muffins okanye i-croissants inikwe iyogathi, iziqhamo ezitsha, ijusi, ikofu okanye iti.
I-suite ibucala kakhulu. ukuba ningababini kwaye azikho ezinye iindwendwe ezibhukishweyo endlwini, wamkelekile ukuba uze kwigumbi lethu lokuhlala ukuze ukonwabele ukuphumla ngasezi…